Tesco Braeburn apụl opekempe 5 Pack | Nzipu ahia otu ubochi - Lewisham Tesco Braeburn apụl Opekempe 5 Pack– Ordrs
Tesco Braeburn apụl opekempe 5 Pack
Firm, crisp & tangy. Aka depụtara site na nlezianya elebara ubi mkpụrụ osisi na Tesco anya, anyị kwenyere na ọ dị mkpa iji ịhọpụta ahọpụtara oge anyị maka ịdị ọcha na ogo ya. Anyị na ndị ọrụ tụkwasịrị obi si n'akụkụ ụwa niile na-arụkọ ọrụ ọnụ, a na-eji aka anyị ahọrọ mkpụrụ osisi apụl Braeburn anyị niile site na ubi mkpụrụ osisi nke ọma. Nke a na - eme ka mkpụrụ osisi apụl kachasị elu nke siri ike ma sie ike.
Ekeputara aka site na nlezianya eleba anya
Jiri nlezianya ahọrọ maka ịdị ọcha na ogo kemgbe 1919
1 nke gị 5 ụbọchị = 1 ahụkarị apụl